MyCO System သို့ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Annual Return- AR) နှင့် အခြားပုံစံများတင်ပြခြင်း | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
» MyCO System သို့ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Annual Return- AR) နှင့် အခြားပုံစံများတင်ပြခြင်း
MyCO System သို့ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Annual Return- AR) နှင့် အခြားပုံစံများတင်ပြခြင်း
အောက်ပါနည်းလမ်း (၃) မျိုးထဲမှ မိမိနှင့် သင့်လျော်သောနည်းလမ်းဖြင့် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Annual Return- AR) နှင့် အခြားပုံစံများတင်ပြနိုင်ပါသည်-
(၁) www.myco.dica.gov.mmမှာ Log In ဝင်၍ Home =>LODGE OTHER FILINGS =>Registration Number ရိုက်၍ Form Category & Forms Available to File (AR &အခြားဖောင်များ)မှာမိမိတင်လိုတဲ့ form ကိုရွေးပြီး SUBMIT ကိုနှိပ်ပါ.
(၂) COMPANY SEARCH မိမိရဲ့ Company အမည်ကိုရိုက်ရှာပြီး Registration No ကိုနှိပ်ပါ =>COMPANY PROFILE ကနေ New Filling ကိုနှိပ် =>Form Category & Forms Available to File (AR &အခြားဖောင်များ)မှာမိမိတင်လိုတဲ့ form ကိုရွေးပြီး SUBMIT ကိုနှိပ်ပါ.
(၃) Home => COMPANIES I MANAGE => Registration No ကိုနှိပ်ပါ =>COMPANY PROFILE ကနေ New Filling ကိုနှိပ် =>Form Category & Forms Available to File (AR & အခြားဖောင်များ) မှာမိမိတင်လိုတဲ့ form ကိုရွေးပြီး SUBMIT ကိုနှိပ်ပါ။
MyCO System တွင် AR တင်ပြပုံ အဆင့်ဆင့်အား ပူးတွဲဖော်ပြပါ Link များတွင် လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်……
နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Annual Return-AR) အားတင်ပြပေးနိ...
MyCOတွင် မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် AR တင်ပြခြင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်-